अचम्म! भेडाले जन्मायो कुकुर - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > विश्व समाचार > अचम्म! भेडाले जन्मायो कुकुर
अचम्म! भेडाले जन्मायो कुकुर
June 23, 2019 June 23, 2019 GRISHI453
संसारको संरचनामात्र होईन मानिस र जीवहरुबीचको सृष्टी संरचना पनि बेला बेला निकै अनौठोरुपमा देखा पर्ने गरेको छ । मानब चिकित्सा क्षेत्रमा मात्र होईन पशु चिकित्सा क्षेत्रमा पनि धेरै अनौठो– अनौठो घटनाहरु हुने गरेका छन् । कहिले मानिसले जनावररुपी शिशुलाई जन्म दिएको त कहिले जनावरले मानिसरुपी बच्चा जन्माएको सुन्ने र देख्ने गरेका छौ । यस्तै भएको छ चीनको एक किसानको घरमा ।
केही समय अगाडी ल्यु नाईयिंग नाम गरेका किसानको घरमा भेडाले कुकुर जन्माएको थियो । मुख , शरिर , खुट्टा कुकुरको जस्तो भएको उक्त कुकुरको शरीरमा भुत्ला भने भेडाको जस्तै छ । त्यति मात्र होईन उक्त कुकुरले जस्तै गतिविधीहरु पनि गर्ने गर्छ । किसान नाईयिंगका अनुसार भेडा चराईरहेको बेला आफ्नो भेडाले जन्म दिएर उक्त कुकुरलाई चाटिरहेको थियो ।
जब उनले पनि उक्त दृश्य देखे तब उनी आश्चर्य चकित भएका थिए । जुन कुकुरमा भेडा र कुकुरको क्रस देखेका थिए । उनको र्फाम हाउसमा उक्त कुकुरलाई हेरेर सबै जना छक्क पर्नै गरेका थिए । तर उता पशु चिकित्सकले भने यो कुरालाई मान्न तयार भएका थिएनन । उनीहरुका अनुसार एउटा कुकुरबाट भेडामा यस्तो क्रिया हुनै सक्दैनन् । उनीहरुले उक्त बच्चा एक असमान्य भेडा मात्र भएको दाबी गरेका थिए ।